१ लाख ६ हजारको खाल सहित १८ जुवाडे पक्राउ
प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७६, आईतवार ११:१२
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर चाडबाड लक्षित बिभिन्न खालका बिकृति बिसंगतीलाई नियन्त्रण्मा अहोरात्र खटिरहेको छ । चाडबाडमा हुने जुवा तास, मापसे गरि सवारी चलाउने, चोरी नियन्त्रण र लागुपदार्थ सेवन कर्ताहरुलाई प्रहरीले निगरानिमा राखेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले शनिबार मात्र कोहलपुरमा जुवा खेल्दै गरेका १९ जना ब्यक्तिहरुलाई बिभिन्न ठाउबाट पक्राउ गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले शनिबार दिउसो करिब ४ बजेको समयमा कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ५ शान्ति नगरबाट ११ जनालाइ २६ हजार र शनिबार रातिनै करिब १२ बजेको समयमा बैजानाथ गाँउपालिका वडा नं. ४ तिलकपुरबाट ८ जनालाई ९० हजार एक सय ५३ रुपैयाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राखेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जुवा खेलाउने वा खेल्नेहरुलाई हतोत्साहित गर्दै आएको छ । कोहलपुर क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा मोबाई जुवा खेलाउने गरेको पाइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी प्रमुख हेम बहादुर शाहीले पक्राउ परेका ब्यक्तिहरुलाई आबश्यक कारबाहीका लागि जिल्लामा जानकारी गराएको समेत बताए । कोहलपुरका बिभिन्न ठाउहरुमा हरेक दिन जसो ठुला ठुला जुवा भैरहेको हुने गरेता पनि प्रहरी उनीहरु समक्ष पुग्न अझै सकेको छैन । जसले गर्दा सिंगो समाज नै बिकृति तिर गैरहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार दशै सम्म ठुला जुवाडेहरुलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने जनाएको छ ।
केहि दिन अधि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका सादा पोसाकका प्रहरीहरुले शम्सेरगंन्जबाट केहि ब्यक्तिहरु जुवा खेलिरहेको सुचना पाएको थियो । तर जुवाडेहरु प्रहरीको हातबाट उम्कीएका थिए । सो स्थानबाट प्रहरीले कसैलाई पनि धम्काउने वा अभद्र ब्याबहार कसैलाई पनि नगरेको शाहीले बताए । प्रहरी समाजको अभिन्न अंग हो, जसले गर्दा प्रहरीले पैसाका लागि गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई जोगाउने कार्य नगर्ने समेत उल्लेख गरे । शाहीका अनुसार प्रहरीलाई बिभिन्न माध्यमबाट हतोत्साहीत गर्ने केहि ब्यक्ति र माध्यमहरु लागेता पनि सहिको पक्षमा आफुहरु भएको हुदा कसै संग नडराई आफ्नो काममा सबै जिम्मेवार भएको बताए । प्रहरीलाई बिभिन्न माध्यममाबाट भ्रामकमा पारेर जुवाडेहरु जुवा खेलाउने पक्षमा लागेका छन तर आफुहरु उनीहरुको जालमा नपर्ने समेत डिएसपी शाहीले जनाए ।